ကလေးများနှင့်လုပ်ရန်ချက်ပြုတ်နည်းများ - ပျော်စရာ၊ ရိုးရှင်း။ ၊ | Bezzia
Susana godoy | 08/04/2021 14:00 | ချက်ပြုတ်နည်းများ
သင်မိသားစုအခိုက်အတန့်၌ပျော်မွေ့လိုပါသလား။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသယ်ဆောင်သွားတာနဲ့တူတယ် ကလေးတွေနှင့်အတူလုပ်ဖို့ချက်ပြုတ်နည်းများ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ထဲရှိကလေးငယ်များသည်ပျော်စရာအချိန်လေးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့မှာသူတို့ဖျော်ဖြေနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့မီးဖိုချောင်ဟာသူတို့ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့နေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုပိုပြီးလုပ်နိုင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဇာတ်ကောင်တွေအဖြစ်ကလေးတွေနဲ့အတူလုပ်နိုင်တဲ့ချက်ပြုတ်နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ kneading ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောအဆင့်များ၊ နောက်ပြီးသူတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဖန်တီးမှုတွေကိုစားတော့မယ်၊ သင်ဟာပျော်စရာကောင်းပြီးရိုးရှင်းသောအတွေးအခေါ်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ ကလေးသူငယ်များကို ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးမည်ဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါအရာအားလုံးကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ။ ငါတို့စရပါ့မလား
1.2 တချို့အရသာရှိတဲ့ fajitas
1.3 အသီး skewers
1.4 Express ချောကလက်ကိတ်မုန့်
2.2 Pop- ကိတ်မုန့်
2.4 ငှက်ပျောသီး bonbons
3.1 မှို -shaped ကြက်ဥ
3.2 ပျော်စရာပုံစံများနှင့်အတူ Puff pastry appetizer
ကလေးငယ်များအတွက်အလွယ်တကူချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်းနှင့်အပူချိန်မကြီးခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တွေအတွက်အဲဒါဟာဂိမ်းတစ်ခု၊ မီးဖိုချောင်မှာပျော်စရာကောင်းတာတစ်ခုဆိုတာသိလို့လေ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များမှသူတို့ကိုအမြဲရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်များနှင့်ကလေးငယ်များအတွက်ရိုးရှင်းသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုချက်ပြုတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ချက်ပြုတ်စရာမလိုတော့သည့်အတွက် ပို၍ လက်တွေ့ကျသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုကောင်းသောသတိပြုပါ!
ဒါဟာငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသောအအေးပန်းကန်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွှာများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့်အလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီဟာကကလေးရဲ့ပြဇာတ်ပဲ၊ ဒီလိုမျိုးကိတ်မုန့်အများစုကိုသူတို့လုပ်ကြတာပေါ့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားပုံသဏ္needာန်လိုအပ်တယ်။ ဒါကအမြဲတမ်းမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ခြေကိုအချပ်မုန့်များဖြင့်ဖုံးအုပ်လိမ့်မည်။ သင်သည်အလွှာများကိုဒိန်ခဲနှင့်တူနာရောစပ်။ ဖြန့်နိုင်သည်၊ ကြက်ဥပြုတ်သို့မဟုတ်သခွားသီးနှင့်ဆလတ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှကိုထည့်နိုင်သည်။။ နောက်မုန့်တစ်ထပ်ထပ်ထည့်တယ်၊ ထပ်ဖြည့်တယ်၊ အသစ်ထပ်လုပ်တယ်။ သငျသညျ mayonnaise, သံလွင်ကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်အရသာဖို့အဆင်သင့်နှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင် ဟုတ်တယ်၊ မီးဖိုချောင်ထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှနောက်မှသူတို့ဟာ fajitas ကိုသာဖြည့်ရမယ်။ ပြောင်းဖူး tortillas အချို့ ၀ ယ်ပြီးအချို့သောအသားဓာတ်များကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် ၅ မိနစ်မပြည့်ခင်မှာကလေးငယ်များအတူတကွစုစည်းကြပြီး၎င်းတို့သည်အပြုံးဖြင့်အရသာရှိသောအရသာရှိလှသည့်အရသာရှိလိမ့်မည်။
သူတို့ကအချိုပွဲအတွက်ဒါမှမဟုတ်အစာစားဖို့အသီးကိုစားနိုင်အောင်သူတို့ကိုအရည်ရွှမ်းတဲ့အမဲလိုက်တချို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုတာနဲ့တူတယ်။။ သင်သစ်သား skewer တုတ်အချို့ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီး၊ သင်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကလေးငယ်များသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးသစ်သီးများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကောင်းဆုံးကတော့သင်ဟာသီးနှံများကိုယခင်ကဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အရသာရှိပြီးအရောင်ရှိနိုင်သောစိတ်ကူးတစ်ခု!
အကယ်စင်စစ်သင်သည်သူတို့မဆိုစူပါမားကတ်မှာရောင်းသောပတ်ပတ်လည်န့်ကိုငါသိ၏။ ကောင်းပြီ, သူတို့ကကိတ်မုန့်၏ကြီးစွာသောအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်သင်ရွေးချယ်တဲ့ချောကလက်မုန့်လိုပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ပေါင်မုန့်ကိတ်မုန့်လိုပဲငါတို့အလွှာတွေဖွဲ့စည်းရတော့မယ်။ ချောကလက်မုန့်နှင့်ဖြည့်စွက်ကာအလွှာများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတော့ချောကလက်ကိုအပေါ်ဘက်ရော၊ ကိတ်မုန့်အပြင်ဘက်မှာပါဖြန့်ကျက်သွားမှာပါ။ ချောကလက်သို့မဟုတ်ရောင်စုံသကြားလုံးများဖြင့်ယခုအလှဆင်ပါ မင်းကမိနစ်အနည်းငယ်နဲ့မီးဖိုမပါဘဲအရသာရှိတဲ့ချောကလက်ကိတ်မုန့်တစ်လုံးရလိမ့်မယ်.
ကလေးသူငယ်များနှင့်အတူချက်ပြုတ်ခြင်းသည်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအချိန်လေးတစ်ခုကိုသင်ဖြတ်သန်းလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာမြင်နိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အချို့မှမုန့်ညက်နှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုဘယ်သူမှမပျောက်နိုင်ကြဘူး။ သူတို့ဟာအလှဆင်ခြင်း၊ knead လုပ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်အားလုံးတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဏ္sectionတွင်ကလေးများနှင့်သူတို့ချစ်ကြမည့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့တွင်အရာအားလုံးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဘယ်သူကပီဇာလုပ်ချင်တာလဲ။ ကောင်းပြီ, ကလေးတွေလည်း။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်တွင်ပီဇာခဏလောင်းသည်။ သင်လုပ်ထားသောအခြေစိုက်စခန်းများကို ၀ ယ်ပါကခရမ်းချဉ်သီး၊ ဒိန်ခဲ၊ သံလွင်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့သို့မဟုတ်ကြက်သားအအေးခန်းစသည့်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအားလုံးနှင့်သာဖုံးအုပ်ရပါလိမ့်မည်။အခြားသူများအကြား။ အကယ်၍ သင်သည်မုန့်စိမ်းကိုပြုလုပ်လျှင်ပိုကောင်းလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့ကိုသင်ရေသို့မဟုတ်ဂျုံမှုန့်များထည့်။ ပွားစေခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ သူတို့နှင့်လိုက်ဖက်ပုံကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းသည် Lollipop တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်ကြီးမားသောဖလား၌ muffins အချို့ကိုဖြိုဖျက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်သည်ဒိန်ခဲမုန့်ကိုထည့်ပြီးကျစ်လျစ်သိပ်သည်းသောရလဒ်ကိုမချမှီတိုင်အောင်ပွားရမည်။ ဒီမုန့်စိမ်း မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘောလုံးအနည်းငယ်ပြုလုပ်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်တို့၏အရသာအတိုင်း၎င်းတို့ကိုပြားချပ်ချပ်ဖြင့်အနည်းငယ်မျှသောအပိုင်းများကိုယူမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်အဖြူရောင်ချောကလက်အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုဖန်တီးရန်အစားအစာအရောင်ထည့်သွင်းရန်ရှိသည်။ ငါတို့ရဲ့ Pop-ကိတ်မုန့်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ Mikado (သို့) skewer တုတ်လိုချိုမြတဲ့အရသာတချို့လိုအပ်တယ်။ သူတို့ကထိပ်ကိုအရည်ပျော်တဲ့ချောကလက်နဲ့စိုပြီးငါတို့လုပ်လိုက်တဲ့မုန့်စိမ်းဘောလုံးတွေကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ ယခုတွင်ဘောလုံးတစ်ခုလုံးကိုစိုစွတ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ အရောင်အသွေးစုံသည့်အရောင်များနှင့်ချောကလက်ခေါက်ဆွဲများဖြင့်အလှဆင်ရန်သာကျန်တော့သည်။ သူတို့ကိုကောင်းစွာခြောက်သွေ့အောင်စောင့်ပါ။ သင်မိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်သည်။
ကွတ်ကီးမုန့်ဖုတ်ခြင်းသည်ကလေးငယ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောဝါသနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုပုံသဏ္givingာန်တွေပေးခြင်းဟာစိတ်ကူးတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ ကလေးတွေအတွက်လွယ်ကူသောအချိုပွဲ။ ပထမတော့ထောပတ် ၁၅၀ လောက်အရည်ပျော်ပြီးသကြား ၁၀၀ ဂရမ်နဲ့ရောတယ်။ အလယ်အလတ်ကြက်ဥနှစ်လုံးနှင့် vanilla essence အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းရောရောထွေးပြီးဂျုံမှုန့် ၂၄၀ ဂရမ်ကိုဆန်ခါချတယ်။ မုန့်စိမ်းကိုဖန်းတီးရန်သင်၏လက်ကိုညစ်ပတ်စေရန်သာကျန်တော့သည်။ ထိုအခါသူတို့သည်သင်၏ဘောလုံးပေါ်ပုံလောင်း။ ပုံသွင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော မူတည်၍ ရှုးကိုသုံးနိုင်သည်။ သူတို့ကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်မီးဖို၌။
ချောကလက်အလယ်၌ပေါ်လာသည့် အချိန်မှစ၍ ကလေးငယ်များနှင့်အတူလုပ်ရမည့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပါ အလွန်သေးငယ်သောအချပ်များထက်ငှက်ပျောသီးအချို့ကိုဖြတ်ပစ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ချောကလက်ကိုပန်းကန်ထဲမှာအရည်ပျော်အောင်လုပ်ရမယ် ကြီးမားသည်။ ယခုသင်သည်အချပ်တစ်ခုစီကိုအရည်ပျော်နေသောချောကလက်တွင်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကသီးခြားဗန်းထဲမှာပစ်ချလိမ့်မည်။ ငါတို့ကိုသူတို့ကြိုက်သလိုရေခဲသေတ္တာထဲအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့အံ့မခန်းပါပဲ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ထဲရှိကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တွေကကလေးငယ်တွေနဲ့ချက်ပြုတ်ရတာဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်၊ ကလေးတွေအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းပြုတ်နည်းတွေကိုဖန်တီးပါ။ ဒီကိစ္စမှာသူတို့ကငါတို့ကိုလည်းအကူအညီပေးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကနည်းနည်းလေးပဲအာရုံစိုက်တော့မယ် အစာမစားလိုသောကလေးငယ်များအတွက်စိတ်ကူးအကြံဥာဏ်များ အရာအားလုံး သူတို့က ကလေးငယ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစားအစာများစားရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ခံစားမှုအားလုံးနှင့်သင်၏အကူအညီဖြင့်ဖွင့်ပေးသောဖန်တီးမှုရလဒ်ကိုခံစားလိမ့်မည်။ အဘယျအရာတောငျးဆိုသနညျး။
မှို -shaped ကြက်ဥ
တစ် ဦး ကပြီးပြည့်စုံသောရိုးရှင်းသောနှင့်မြန်စာရွက်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ကြက်ဥတွေကိုချက်ပြုတ်ရမယ်။ အေးခဲနေရင်သူတို့ကိုအခွံချပြီးငါတို့ကိုဗန်းထဲထည့်ပါ။ အခု ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးတစ်ဝက်ကို ဦး ထုပ်တစ်ခုအနေဖြင့်ထားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုကြက်ဥဖြန်းနိုင်တယ်။ သင်ဤပန်းကန်ကိုအသုပ်အနည်းငယ်နှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်ပြီးရလဒ်ကောင်းများအတွက်ဥများမကြီးပါက ပို၍ ကောင်းသည်ကိုသတိရနိုင်သည်။
ပျော်စရာပုံစံများနှင့်အတူ Puff pastry appetizer
သငျသညျအခြို့သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့် r ကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာများနှင့်အတူတစ် puff pastry ecortar။ အရိုးရှင်းဆုံးအရာမှာမျက်နှာအတွက်ပတ်ပတ်လည်တွင်အခြေပြုပြီးနားရွက်အတွက်သေးငယ်သည့်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာ piggy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ပတ်ပတ်လည်မှာပတ်ပတ်လည်တပ်ထားမယ်။ မုန့်စိမ်းကိုအနည်းငယ်စိုစွတ်စေခြင်းဖြင့် puff pastry အပိုင်းအစများကိုသင်ကပ်နိုင်သည်။ သင်ကသင်လိုချင်သောပုံသဏ္giveာန်ကိုပေးသည်။ ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အလှဆင်ခြင်းနှင့်မီးဖို၌ထည့်နိုင်သည်။ သူတို့ကချစ်ကြလိမ့်မယ်
သငျသညျသူတို့ကိုသဘာဝအခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ဝက်အူချောင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူအချို့သောဖြူဆန်ကိုစားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ယခုဖန်တီးမှုလမ်းအတွက်ပန်းကန်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်ပတ်ပတ်လည်ဆန်ကိုပန်းကန်၏အလယ်တွင်ထားလိမ့်မည်။ နှာခေါင်းအတွက်တော့ခရမ်းချဉ်သီးတစ်ဝက်လောက်သုံးမယ်။ သံလွင်သီးနှစ်ချောင်းကမျက်စိဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်းစားလို့ရပါတယ် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဟင်းလျာများလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ သူတို့သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ၊ centipede ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသခွားသီးအချပ်နဲ့လောင်းတာကိုဆိုလိုတာပါ။ သူ၏ ဦး ခေါင်းသည်နောက်တဖန်ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးတစ်ဝက်နှင့်သူ၏ခြေထောက်များ, မုန်လာဥအပိုင်းပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကပြောင်းဖူးအနည်းငယ်နှင့်အတူပန်းကန်၏ထိပ်ပေါ်မှာနေရောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပြီးသားကြောင်းမြင်နေကြသည် ကလေးများနှင့်အတူအောင်ချက်ပြုတ်နည်းများအလွန်ဖန်တီးမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ကလေးငယ်များသည်ပဲဟင်းကိုအလွန်မုန်းကြောင်းသင်တွေ့မြင်လျှင်တစ်ခုခုတီထွင်ရမည်။ သူတို့ကိုချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းပဲချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဆန်ကိုအလယ်အလယ်မှာပန်းကန်ထဲထည့်လိုက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဝံနားမှာကြက်ဥတစ်ဝက်၊ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥတစ်လုံးနဲ့အလယ်ဗဟိုမှာသံလွင်သီးတွေကျနေတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ပန်းကန်ကိုအသက်ရှင်စေပြီးသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့အားကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်။ သင်၌ပဲဟင်းလေးရှိပြီးပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ချက်ပြုတ်နည်းများ » ကလေးတွေနှင့်အတူလုပ်ဖို့ချက်ပြုတ်နည်းများ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲဆိုင်ရာစာအုပ် ၅ အုပ်